मा सम्झौता सम्बन्ध: रहस्य कोरियाली डेटिङ - कुलीन बालिका
मा सम्झौता सम्बन्ध: रहस्य कोरियाली डेटिङ — कुलीन बालिका
त्यसैले, यदि तपाईं अझै पनि सोच किन सम्झौता महत्त्वपूर्ण छ मा एक सम्बन्ध, हामी जवाफ थाह छ । सम्बन्ध ठाउँ लिन दुई मान्छे बीच र बाहिर खेलेको मा आफ्नो साधारण जमीन । यो साधारण जमीन छ समझौता, र यो एक आधारभूत तह लागि प्रतिबद्ध सम्बन्ध छ । सम्झौता सामान्यतः रूपमा बुझेका दिने कुरा माथि पुग्न क्रम मा एक ठाउँ संग समझ को आफ्नो साथी । कुनै दुई मान्छे नै हो । केही बिन्दु मा आफ्नो सम्बन्ध मा तपाईं र तपाईंको साथी हुनेछ, फरक दृष्टिकोण, विचार वा इच्छा छ । यो बिन्दु मा, को एक तपाईं आवश्यक मान्नु, वा राम्रो वैकल्पिक छ गर्न समझौता छ । समझौता एक ‘मध्यवर्ती राज्य बीच विवादित विकल्प पुगेको गरेर आपसी सुविधा’.
लक्ष्य छ कि यो सम्झौता परस्पर लाभदायी छ — कि तपाईं प्राप्त, गुमाउन छैन, मार्फत यो सुविधा छ । प्रत्येक साथी हुनुपर्छ नतिजा संग खुसी छ । तर, यो पनि»रूपमा परिभाषित फाइदा स्वीकृति को स्तर भन्दा कम कि मनमोहक छ». यो छ को तल पक्ष समझौता छ । सफलतापूर्वक सम्झौता सम्बन्ध मा, बलिदान समझौता छ । सम्झौता कहिल्यै गर्नुपर्छ, बलिदान को कोर मान, विश्वास वा आवश्यक छ । जब कि छ, यो मात्रा छ इत्तला दियो पनि टाढा गलत निर्देशन छ । यी दुवै स्पष्टीकरण जोड विरोधाभासपूर्ण प्रकृति को समझौता छ । यो दुवै हुन सक्छ संकल्प र को एक सम्बन्ध छ । त्यसैले कसरी गर्छ सम्झौता खेल्न बाहिर मा अभ्यास । सम्झौता सम्बन्ध मा गर्न सक्छन् एक मुश्किल संतुलन काम छ । यो भएको छ, भनिन्छ एक आवश्यक दुष्ट । तर, क्षमता सम्झौता गर्न एक बहुमूल्य कौशल भर व्यक्तिगत र व्यावसायिक सम्बन्ध छ । हामी गर्न सक्छन् छैन सधैं सही हुन, तर हामी भने सधैं दिन मा, समझौता हुन सक्छ रीसको भावना छ । रूपरेखा को आवश्यक सीप सफल ओगटेको छ । सम्झौता सधैं सजिलो छैन. कहिलेकाहीं तपाईं जीत एक सानो, कहिलेकाहीं तपाईं गुमाउन एक सानो. भने तर तपाईं को दुवै गर्न इच्छुक छैनन् बलिदान सम्बन्ध मा, पुग्न एक जंक्शनमा आफ्नो सम्बन्ध मा हुनेछ भनेर यो ल्याउन गर्न एक पीस विराम.
त्यसैले, उत्साहजनक सम्बन्ध मा
पुरानो स्वयंसिद्ध आनन्दित पत्नी, खुसी जीवन छ चिंतनशील को एक निश्चित सत्य छैन । आफ्नो सम्बन्ध धेरै सुखी गर्दा आफ्नो साथी खुसी छ । तर होइन कि तिनीहरूले प्राप्त गर्न आफ्नो बाटो मात्र छ । भइरहेको सुने र बुझे गर्न मौलिक छ जडान । केही क्षेत्रमा आवश्यक छन् गर्न मा एक सम्झौता पुग्न रूपमा तिनीहरूले फारम दैनिक जीवनको भाग हो. भएको गम्भीर साथी, तपाईं मतलब हुनेछ छ निपटने गर्न केही मुद्दाहरू बाटो साथ । र यी ठाउँमा जहाँ बन्द दिन्छिन् । सुन्न प्रत्येक अन्य बाहिर, जडान र सिर्जना एक साझा दृष्टिकोण छ । मुद्दाहरू फारम को एक आधार कसरी तपाईं जीवित बाहिर आफ्नो जीवन सँगै लिन सक्छ, एक सानो वार्तामा पुग्न त्यो ठाउँ जहाँ तपाईं दुवै महसुस स्वीकार, र स्वीकार. तर मा राख्न प्रयास पार गर्न ठूलो भाग पाउन र आफ्नो सम्बन्ध बीचमा जमीन मा यी आधारभूत मुद्दाहरू । आनन्दित प्रेम बराबरी आनन्दित जीवन छ । सबै सम्झौता आधारित छ दिन र लिन, तर गर्न सक्छन् छैन हुन दिन र लिन केही. सम्बन्ध हुँदैन उल्लंघन निश्चित कोर कारक छ । आफ्नो अधिकार र आवश्यकता कहिल्यै गर्नुपर्छ उल्लङ्घन गरेर आफ्नो साथी । यी क्षेत्रमा जहाँ तपाईं गर्नुपर्छ छैन, तल पछाडि र समझौता हुनेछ वास्तवमा यो सम्झौता ब्रेकर. यो मेरो बाटो वा राजमार्ग छैन सबैभन्दा. तर, यदि तपाईंको साथी चाहन्छ तपाईं सम्झौता गर्न मा मुद्दाहरू मौलिक आफ्नो पहिचान र मान, समय सुरु गर्न दूर हिँडिरहेका छन् । भने यो मतलब आफ्नो स्तर भन्दा कम लागि तपाईं योग्य हुनुहुन्छ । यो बनाउन को बारे मा एक निष्पक्ष खेल क्षेत्र समायोजन गर्न दुई व्यक्तिहरूलाई. यो बारेमा गर्न एक कम मानक छ । यो लक्ष्य गर्नुपर्छ, तपाईं दुवै तिर काम गर्न छ को सबै भन्दा राम्रो प्राप्त दुवै आफ्नो संसारहरू. सम्झना कि, आफ्नो दृष्टिकोण सम्झौता गर्न हुनुपर्छ को शुरुवात जडान र आवश्यक छैन गर्न निश्चित हुन. परिवर्तन, र बढ्न अनुकूल सँगै । सिक्न आफ्नो पाठ र राम्रो बनाउन के तपाईं आफ्नो समझौता हुन सक्छ रूपमा लचिलो रूपमा आफ्नो मनोवृत्ति हुनुपर्छ । प्रयोग आफ्नो व्यक्तिगत बल र कमजोरी, धारणा र मान विस्तार गर्न, र छैन अनुबंध प्रत्येक अन्य संसारहरू. सम्झौता सम्बन्ध मा गर्न सक्छन् छाप्नु गर्न सडक सन्तुष्टि
← वैकल्पिक संग अधिक बालिका
र दक्षिण कोरिया महिला डेटिङ, दक्षिण कोरिया एकल महिला अनलाइन →